Manakatontranonkala ireo miahy tena malaza ao Tanzania fa antomotra ny fanombohan’ny “fampandoavana hetran’ny bilaogera” · Global Voices teny Malagasy
Manakatontranonkala ireo miahy tena malaza ao Tanzania fa antomotra ny fanombohan'ny “fampandoavana hetran'ny bilaogera”
Voadika ny 16 Jona 2018 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Swahili, Français, Italiano, English
Mpanorina ny Jamii Forum, Maxence Melo. Sary tao amin'ny Facebook. Nahazoana alalana.
Tahaka ireo bilaogy miahy tena marobe sy pejy media sosialy, nanakato-tena ihany koa ny Jamii Forum, tranonkalam-panehoan-kevitra sady tranokalam-baovao mahaleotena malaza indrindra ao Tanzania ho fitsinjovana mialoha manoloana ny “hetran'ny bilaogera” hihatra atsy ho atsy.
Tamin'ny 15 jiona 2018, tsy maintsy misoratra anarana sy mandoa vola 900 dolara Amerikana isan-taona ireo bilaogera Tanzaniana vao afaka mamoaka votoaty antserasera. Raha mbola miasa aorian'ny 15 jiona tsy misy fahazoan-dalana ireo bilaogy sy ireo karazana votoaty antserasera hafa tahaka ny fantsona YouTube, dia mety ho voasazy handoa onitra tsy latsaky ny 5 tapitrisa shillings Tanzaniana (eo amin'ny 2 500 dolara Amerikana) na fanagadrana “tsy latsaky ny 12 volana na izy roa miaraka. “
Raha lafo loatra ny saram-pisoratana anarana sy ny onitra any aoriana, nilaza ireo bilaogera marobe fa tsy ny vola ihany no olana fa eo koa ny hasarotany sy ny fanerena hampihatra ireo fitsipika vaovao.
Hatramin'ny namoahan'ny Fahefana Tanzaniana mpandrindra ny fifandraisana (TCRA) ilay torolàlana voalohany tamin'ny 16 Marsa 2008, namaly tamim-pahavitrihana manoloana ny lalàna vaovao tamin'ny fomba samihafa ireo bilaogera Tanzaniana sy fikambanana fiarahamonim-pirenena.
Nanao fanangonan-tsonia izay natolotra tao amin'ny Fitsarana Ambony tao Mtwara tamin'ny 4 Mey ny firaisamben'ny Foiben'ny Lalàna sy ny Zon'olombelona sy ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena hafa, ao anatin'izany ireo mpiaro ny zon'olombelona Tanzania, ny Filankevitry ny Media ao Tanzania, ny Jamii Media, ny Fikambanam-behivavy vehivavy ao Tanzania ary ny Forum tonian-dahatsoratra ao Tanzania. Nangataka tamin'ny ekipa ny mpitsara mba hamerina ny fangatahany noho ny antony ara-teknika, fotoana izay nahazoan'izy ireo didy vonjimaika hatramin'ny 28 may. Na izany aza, notsipahan'ny fitsarana ihany ny raharahan'izy ireo, nilaza ny mpitsara fa “tsy nahavita nampiseho ny fiantraikan'ny fitsipika eo amin'izy ireo ny fikambanana. “
Nanohitra ny fitsipika vaovao mifehy ny bilaogy ireo bilaogera Tanzaniana, maneho hevitra am-pahibemaso momba ny fitsipika mifehy ny bilaogy antserasera. Nampiato ny tranonkalany tamin'ny 1 Mey ho mariky ny fanoherana i Aikande Kwayu, izay nibilaogy manokana momba ny politika Tanzaniana sy ny fifidianana tamin'ny taona 2015 (ary koa manoratra fanadihadiana boky sy tantara foronina indray mihelatra).
Nanasa ireo bilaogera Tanzaniana mba hamoaka lahatsoratra ao amin'ny bilaoginy ny Mtega, bilaogy momba ny teknolojia sy ny fampandrosoana an'i Ben Taylor izay mipetraka any amin'ny Fanjakana Mitambatra. Nanome ny bilaoginy Udadisi (“Fahalianana te-hahafanatra” amin'ny teny Swahili) ho an'i Takura Zhangazha, monina ao Zimbaboe i Chambi Chachage tamin'ny 27 aprily. Ary i Elsie Eyakuze kosa nametraka ny bilaoginy The Mikocheni Report eo am-piandrasana, miala sasatra mba ho lasa “mpitsoa-ponenana nomerika”:
Eny. Miato kely aho, ary amin'ny maha mpitsoam-ponenena nomerika, hiankina amin'ny fahatsaram-panahin'ny hafa mandra-pahitako valiny amin'ny Inona no Fanontaniana Manaraka.
Ny 11 jona, nanapa-kevitra hikatona ny tranonkala malaza indrindra Jamii Forum – izay nantsoina hoe “Reddit Tanzaniana” sy “Wikileaks Swahili” – ka niteraka onja lehibe tao amin'ny sehatry ny media sosialy Tanzaniana.
Tamin'ny Desambra 2016, nosamborin'ny polisy Tanzaniana i Maxence Melo, mpiara-manorina sady talen'ny Jamii Forums, noho izy nandà tsy hanome torohay momba ireo mpikambana ao aminy, fangatahana natao teo ambanin'ny Lalànan'ny heloka antserasera.
Ny 12 Jona, nosiahan'i Elsie Eyakuze ny fomba nampifandraisan'ny media sosialy ny olona ivelan'ny aterineto ao Tanzania, ary koa ny andraikitra manan-danja noraisin'i Jamii amin'ny mha sehatra ho an'ny mpanao ampamoaka ireo antontan-taratasy tafaporitsaka mikasika ny kolikoly azy:
Ny tiako lazaina. Namoaka ireo antontan-taratasy tahaka ny rehetra tamin'ny alalan'ny forum ny olona. Way pre Mange Kimambi. Tsy nieritreritra mihitsy fa hiafara amin'ny fihaonana amin'i Mike sy Max aho. Nitsiky mora foana izy ireo avy eo. Mbola tanora kokoa izahay rehetra! avy eo mihaona aminareo rehetra. Akina @mtega sy @Dunia_Duara
Nandritra ny tafatafa iray, nilaza tamin'ny The Citizen ny mpamorona ny Jamii Forum, Maxence Melo hoe: “Mazava fa nokendrena ny sehatray rehefa novolavolaina ity fitsipika ity.”
Ny sandan'ny fahazoan-dalana isan-taona 900 dolara Amerikana dia volabe ao amin'ny firenena izay mbola miaina anatin'ny fahantrana lalina ny iray ampahatelon'ny mponina. Mety ho tratran'ny sakana amin'ny fanjakam-birao ny fitakiana hanoratra anarana ny sehatra sy hahazoana taratasy fandoavan-ketra satria olona mandeha tsirairay tsy manana orinasa voasoratra anarana ny ankamaroan'ny bilaogera. Ireo bilaogy sy ireo tompon'ny fampahalalam-baovao antserasera no voalohany takiana mba hahazo fahazoan-dàlana, ary mba hampanano-sarotra ny raharaha, tsy maintsy manaraka fitsipika marobe izy ireo.
Tamin'ny 12 Jiona, Aikande Kwayu nanoratra sioka hoe:
Mihevitra koa aho fa tsy ny fandoavam-bola na ny andraikitra aorian'ny fahazoan-dalana (raha mahazo) no olana. Tsy fahazoan-dalana hanivanan-tena ihany izany fa koa fomba iray mba ho lasa fitaovam-panjakana hanivana ny zon'ny (mpandray anjara) hafa haneho hevitra
Ny 12 Aprily, nanazava ny sasantsasany tamin'ireo zava-tsarotra ireo i Ben Taylor, manasongadina fa mitaky amin'ny tompon'ny bilaogy ny fitsipika fa “tsy maintsy mamantatra izay rehetra mamoaka votoaty”, ary “tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana” mifandraika amin'ireo fitsipika ireo ny tompon'ny bilaogy.
Pikantsarin'ny fitsipika TCRA manasongadina ireo fanontaniana sy famaritana mifandraika amin'ny lalàna vaovao navoaka tao amin'ny Twitter.
Manolo-kevitra i Taylor fa mety hiteraka “fangatahana hamoaka ny mombamomba ny olona rehetra manoratra ao amin'ny tranokalanao izany, mahatonga fahafantarana mora kokoa ny mombamomba izay rehetra maneho hevitra tsy mitonona anarana ao amin'ny bilaogy, sy ireo tranokalan'ny gazety na dinika amin'ny tranonkala.
Any Tanzania, nihabetsaka ny fifandirana ara-politika nandritra ny taona vitsy lasa. Hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2015, voafetra ny hetsika ataon'ny mpanohitra ao Tanzania, toy ny fandraràna ireo famoriam-bahoaka fanoherana sy ny fanampenam-bava ny famoaham-baovao miahy tena, sazy, fampitahorana ary famaizana ny olom-pirenena noho ny fanakianana ny filoha John P. Magufuli ao amin'ny antoko Chama Chapa Mapinduzi (CCM, Swahili : “Antoko Revolisionera”).
Nandray anjara lehibe tamin'ny fanampenam-bava ny mpanohitra ny lalànan'ny heloka antserasera ao amin'ny firenena, izay nolaniana tamin'ny taona 2015. Tamin'ny 2015 sy 2016 fotsiny, Tanzaniana 14 farafahakeliny no nosamborina sy nenjehana teo ambanin'ny lalàna, noho ny fanevatevana ny filoha tao amin'ny media sosialy.
Tsy i Tanzania no hany firenena mifehy ny olom-pireneny amin'ny fampiasana media antserasera tao anatin'izay volana vitsy izay. Vao haingana i Oganda sy Kenya no namoaka famerana vaovao antserasera amin'ny famokarana sy fandrindrana votoaty.
Tantaran'ny Tanzania farany
02 Novambra 2020Afrika Mainty
17 Jona 2020Afrika Mainty